မေ 2019 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
637690 Views so far
မေ 30, 2019 နေ့
မေ 4, 2019 နေ့
တဈနသေ့၌ ကြှနျုပျထံသို့ ဒျေါလှခြောဆိုသူ အသကျငါးဆယျကြျောအရှယျ မိနျးမကွီးတဈဦး ရောကျရှိလာလေ၏။ ၎င်းငျးသညျ လှနျစှာ လြှာရှညျလှသောကွောငျ့ ကြှနျုပျက ဒျေါဝါယောဟုသာ ချေါလတေော့၏။ ကြှနျုပျက – “ပြောကျလှခလြေား ဒျေါဝါယောရေ . . . ဟု မေးလိုကျသောအခါ ဒျေါဝါယောကွီးက – “ ပြောကျနရေငျ စိတျခမျြးသာပတေော့ဆရာရေ . . .၊ ကိုယျ့ဟာကိုယျ အဆငျပွလေို့ ပြောကျနတောမှတျပါ …၊ အဟဲ … အခုလို ပျေါလာပွီဆိုရငျတော့ တဈခုခု အဆငျမပွလေို့လို့သာ မှတျပတေော့ ဆရာရေ . . . ဟု ပွနျပွောလေ၏။ ကြှနျုပျလညျး ၎င်းငျးအား မနောမယလကျဖကျရညျဖွငျ့ ဧညျ့ခံရလေ၏။
ထို့နောကျ ကြှနျုပျက – “ဆိုစမျးပါဦး၊ ဘာတှမြေား အဆငျမပွလေို့လဲ … . . ဟု မေးလိုကျရာ ဒျေါဝါယောကွီးက –
“အဆငျမပွတောက ကြှနျမမဟုတျဘူး ဆရာရဲ့၊ တူမလေးတဈယောကျ အဆငျမပွတောပါ၊ သို့ပသေျောလညျးပဲ အဲဒီတူမလေးက ကြှနျမကို ပေးကမျးထောကျပံ့နတောဆိုတော့ သူအဆငျမပွခွေငျးဟာ ကြှနျမရဲ့အဆငျမပွခွေငျးပဲပေါ့၊ အဲဒီတော့ . . .သူအဆငျပွပေါမှ ကြှနျမအဆငျပွမေယျ့ ကိစ်စပေါ့ဆရာရယျ .. . . ဟု ပွောလတေော့၏။ ကြှနျုပျလညျး ခေါငျးကိုကုပျရငျး “ရှငျးရှငျးပွောစမျးပါ ဒျေါဝါယောရယျ ”ဟု ပွောလိုကျရ၏။ ဒျေါဝါယောကွီးက နှုတျခမျးကိုမဲ့ရငျး “ဆရာ နားရှုပျမှာစိုးလို့ကိုပဲ အစကတညျးက မရှငျးရှငျးအောငျဆိုပွီး ရှုပျနိုငျတဲ့ကိစ်စကို ရှငျးအောငျ တဈခကျြခွငျး ရှငျးရှငျးလေး ပွောလိုကျတာလေ ဆရာရဲ့ ဆရာတို့လညျး ခကျပါတယျ … . .ဟု ပွောပွနျသဖွငျ့ ဟု ပွောပွနျသဖွငျ့ ကြှနျုပျလညျး – “ဟုတျပါပွီဗြား၊ ခငျဗြားတို့ပဲ လှယျပါတယျ၊ ကဲ . . .ပွောကွညျ့ပါဦး၊ ဘာကိစ်စလဲ . . .”ဟု ပွောလိုကျရလေ၏။ ထိုအခါ ဒျေါဝါယောကွီးက “အဲဒီကိစ်စက အစတုနျးကတော့ အဆငျပွနေတော ဆရာရဲ့ ၊ ဒီနောကျပိုငျးကမြှ သိသိသာသာ အဆငျမပွဖွေဈလာတာ၊ ဘာကိစ်စလဲဆိုတော့ တူမလေးရဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျကိစ၊ တူမလေးက သူ့အိမျရှမှေ့ာပဲ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျလေး တဈနိုငျတဈပိုငျဖှငျ့ပွီးရောငျးတာ၊ တျောတေျာ့ကို အဆငျပွခေဲ့တာ၊ သူတို့ရပျကှကျထဲမှာတော့ နာမညျကိုကွီးသှားတာပဲ၊ တျောတျောကိုရောငျးရတာ၊ သူ့မုနျ့ဟငျးခါးဆိုရငျ အဖိုးကွီး အဖှားကွီးတှကေလညျးကွိုကျတယျ၊ ကလေးတှကေလညျး အရမျးကွိုကျတာ ဆရာရဲ့” ဟု ပွောရာ ကြှနျုပျက -“ အဲဒီလောကျ အဆငျပွနေတောမြား ကြုပျစားဖို့လညျး မုနျ့ဟငျးခါးလေးထညျ့ယူလာခဲ့ပါတော့လားဗြာ . . .” ဟု ပွောလိုကျလေ၏။ ထိုအခါ ဒျေါဝါယောကွီးက -“ အဲဒါက ဟိုအရငျတုနျးကပွောတာ ဆရာရဲ့ ၊ အခု အဲဒီလိုမဟုတျတော့ဘူး၊ အခွအေနကေ ပွောငျးပွနျဖွဈသှားပွီ . . .” ဟု ပွောသောကွောငျ့ ကြှနျုပျက -“ သွျော . . .အဲဒါဆို ကြုပျကတောငျ လမျးထိပျကနေ မုနျ့ဟငျးခါးဝယျပွီး ခငျဗြားကိုပွနျထညျ့ပေးလိုကျမယျ့ အပေါကျမြိုး ဖွဈနပွေီထငျတယျ . . .” ဟု ပွောလိုကျရာ ဒျေါဝါယောကွီးက ခေါငျးကလေးကို တှငျတှငျညိတျရငျး – “ ကောငျးတယျ ကောငျးတယျ၊ ဆရာ့အစီအစဉျမဆိုးဘူး . . .”ဟု ပွောလေ၏။
ထို့ကွောငျ့ ကြှနျုပျက – “ ကဲပါ ဒျေါဝါယောရယျ . . .ခငျဗြားတူမဆိုငျက ဘာဖွဈနလေို့လဲ ဆိုတာလေးပဲ လိုရငျးကိုရောကျအောငျ ပွောစမျးပါဗြာ . . .” ဟု တိုကျတှနျးရလေ၏။ ထိုအခါ ဒျေါဝါယောကွီးက –
“ ဒီလို ဆရာရဲ့ . . . သူ့ဆိုငျလေးက တျောတေျာ့ကို ရောငျးကောငျးခဲ့တာ၊ ကြှနျမလညျးစိတျခမျြးသာရတာပေါ့လေ၊ ဒီနောကျပိုငျး သိသိသာသာ ရောငျးအားကသြှားတယျ၊ သူ့ဆိုငျကိုအားပေးနကြေ ပုံမှနျဖောကျသညျတှပေါ တဖွညျးဖွညျးပြောကျသှားကွတယျ၊ ကြှနျမသတိထားမိတဲ့အတိုငျးဆိုရငျတော့ . . .သူတို့ဆိုငျနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျက အခနျးကို လူအသဈတှပွေောငျးလာပွီးကတညျးက မှတျမှတျရရ အဲဒီလိုဖွဈသှားတာပဲ . . .” ဟု ပွောပွလေ၏။ ထိုအခါ ကြှနျုပျက -“ အဲဒီပွောငျးလာတဲ့မိသားစုဟာ တျောတေျာ့ကို ခဈြခဈြခငျခငျ၊ စညျးစညျးလုံးလုံး၊ ကွငျကွငျနာနာရှိကွဟနျတူတယျဗြ . . .” ဟု ပွောလိုကျရာ ဒျေါဝါယောကွီးသညျ ရငျဘတျကိုလကျဖွငျ့ ဖွတျကနဲ ဖိ၏။ မေးစကေို့ ရှသေို့ထိုး၍ နှုတျခမျးကိုမဲ့၏။ ပွီးနောကျ – “ အောငျမယျလေးတျော . . .အဲဒီမိသားစုလောကျ ရနျသတျတာ၊ အဲဒီမိသားစုပဲ ရှိမယျထငျပါရဲ့၊ ပွီးကို မပွီးနိုငျတော့ဘူး၊ နှဈလေးဆယျ စဈတိုကျခဲ့ကွတယျဆိုတဲ့ ဗမာဘုရငျ အငျးဝမငျးခေါငျနဲ့ မှနျဘုရငျ ရာဇဓိရာဇျတို့ တဈမိသားစုထဲမှာ ဝငျစားလာကွသလား အောကျမရေ့တယျ၊ သတျလိုကျကွတဲ့ရနျဆိုတော့ ဆရာရယျ . . .၊ သံဃာတျောတှေ အရုဏျဆှမျးခံ မကွှခငျကနေ ညကာလသားတှေ အိမျပွနျရောကျတဲ့အထိ သူတို့အိမျမှာက ပတျလညျလှညျ့ပွီး ရနျသတျနကွေတာ ဆရာရေ . . .” ဟု မဲ့ကာရှဲ့ ကာနှငျ့ ပွောနသေောကွောငျ့ ကြှနျုပျလညျး တခဈခဈနှငျ့ ရယျနမေိလတေော့၏။ ထို့နောကျတှငျမှ – “ ဒီလိုရှိတယျ ဒျေါဝါယောရဲ့ ၊ ကိုယျ့အိမျတို့ ၊ ဆိုငျတို့ရဲ့ ခေါငျးရငျးဘကျတှေ၊ ရှမေ့ကျြနှာစာတှေ ဆိုတာဟာ ကိုယျ့ရဲ့ မင်ျဂလာယူရာ အရပျတှဗြေ . . .၊ အဲဒီဘကျတှကေနေ ဘုရားသံ၊ တရားသံတို့ ၊ ကွညျနူးခမျြးမွစေ့ရာတို့ မွငျလလေေ၊ ကွားလလေေ၊ ကွုံလလေေ ကိုယျအိမျ၊ ကိုယျ့ဆိုငျမှာလညျး နိမိတျကောငျးပွီး လာဘျရှငျစီးပှားတကျလေ ဖွဈတတျတယျဗြ . . .။
အဲဒီလိုမဟုတျဘဲ အဲဒါနဲ့ပွောငျးပွနျ ရှမေ့ကျြနှာစာတို့၊ ခေါငျးရငျးဘကျတို့ကနေ ဆဲကွ၊ ဆိုကွ၊ သတျကွ၊ ပုတျကွ၊ ငိုကွ၊ ယိုကွ … မကောငျးတာတှေ မွငျရ၊ ကွားရ၊ ကွုံရမယျဆိုရငျတော့၊ သူတို့ဆီက မကောငျးခွငျးတှဟော ကိုယျ့အတှကျပါ မကောငျးနိမိတျအဖွဈ လာပွီးသကျရောကျတတျတယျဗြို့ . . .၊ ဟိုဘကျက ရနျသတျလလေေ၊ ဒီဘကျကလညျး နရေငျးထိုငျရငျး လာဘျပိတျလလေတှေေ ဖွဈကုနျတတျတယျ . . .”ဟု ပွောလိုကျရာ ဒျေါဝါယောကွီးက အလငျြစလိုဖွငျ့ –
“ ဟုတျတယျဆရာရေ့ ဟုတျတယျ၊ ဟုတျတယျ၊ ကြှနျမက သသေခြောခြာကို သတိထားမိနတော၊ ဟိုတလောလေးတုနျးက အဲဒီမိသားစု တဈစုလုံး ခရီးထှကျသှားကွတာ လေးရကျလောကျ ပြောကျသှားကွတယျ၊ အဲဒီလေးရကျလောကျမှာ လူပါးနတေဲ့ တူမလေးရဲ့ ဆိုငျဟာလေ ကွိတျကွိတျတိုး လူတှပွေနျပွညျ့သှားတယျ ဆရာရဲ့ ၊ သူတို့တှလေညျးပွနျရောကျလာရော ကြှနျမတူမရဲ့ ဆိုငျကလေးလညျး အရငျးပွုတျရော ဖွဈတော့တာပါပဲ ဆရာရဲ့ ၊ အဲဒီတော့ ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ၊ အဲဒီမိသားစု အမွဲတမျးခရီးထှကျနအေောငျ ဆရာ့အနနေဲ့ ဓါတျရိုကျဓါတျဆငျလေးလုပျပေးပါလား . . . ဟု ပူဆာလတေော့၏။ ကြှနျုပျက ရယျ၍ –
“ အောငျမယျလေး ဒျေါဝါယောရယျ . . .၊ သူမြားမိသားစုကိစ်စက ခငျဗြားနဲ့ဘာဆိုငျလို့လဲ၊ ကိုယျ့တူမဆိုငျ အဆငျပွရေေးကိုပဲ ခငျဗြားက လုပျရမှာလေ၊ ဒီလိုလုပျဗြာ . . .၊ ဟိုဘကျက ဆဲသံ၊ ဆိုသံ၊ ရနျဖွဈသံကွားလလေေ ကိုယျ့ဘကျကလညျး ဘုရားတရားကွညျညိုခွငျးကို ပိုပွီး လုပျလလေေ ဆိုတာမြိုးဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ၊ ပွီးတော့ ခေါငျးရငျးတို့၊ မကျြနှာခငျြးဆိုငျတို့ကနေ ဆဲသံ၊ ငိုသံ၊ ရနျဖွဈသံလိုဟာမြိုး ကွားလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့ဆိုငျတို့ ၊ အိမျတို့ရဲ့ နောကျဖေးဘကျမှာရှိတဲ့ အိမျသာတံခါးတို့ ၊ မီးဖိုခြောငျတံခါးတို့ စသညျဖွငျ့ နောကျဖေးဘကျမှာ ဆူဆူညံညံအသံထှကျသှားအောငျ ခွထေောကျနဲ့ ကနျကြောကျလိုကျတာမြိုး လုပျလိုကျပါ၊ အဲဒါဆိုရငျ ကိုယျ့အတှကျ လာပွီးခိုကျစမေယျ့ နိမိတျဆိုးဟာ နိမိတျကောငျးအဖွဈ ပွောငျးသှားပွီး ဟိုဘကျက မကောငျးတဲ့ အသံဗလံတှေ ထှကျလလေေ ကိုယျ့ဆီမှာ လာဘျပှငျ့လလေေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျတဲ့ဗြား . . .”ဟု ပွောပွလိုကျရလေ၏။ ဒျေါဝါယောကွီးက – “ အဲဒါလောကျလေးနဲ့ အဆငျပွပေါ့မလား ဆရာရယျ . . .” ဟု မယုံမရဲလသေံကလေးဖွငျ့ မေးလေ၏။ ထို့ကွောငျ့ ကြှနျုပျက – “အဆငျပွတေဲ့အပွငျ ဟိုဘကျကိုတောငျ လှနျသှားပါလိမျ့ဦးမယျ ဒျေါဝါယောရေ . . .၊ အဲဒီလို အဆငျပွတေဲ့အကွောငျး သကျသပွေတဲ့အနနေဲ့ နောကျတဈပတျ ဆယျရကျကွာတဲ့အခါ ခငျဗြားတူမဆိုငျက မုနျ့ဟငျးခါးလေး ပါဆယျနှဈထုပျလောကျဆှဲလာပွီး ဝမျးသာအားရ လာပွောလှညျ့ပတေော့ဗြို့ . . .” ဟု ပွောလိုကျရလတေော့သတညျး … ။
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ဒေါ်လှချောဆိုသူ အသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ် မိန်းမကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၄င်းသည် လွန်စွာ လျှာရှည်လှသောကြောင့် ကျွန်ုပ်က ဒေါ်ဝါယောဟုသာ ခေါ်လေတော့၏။ ကျွန်ုပ်က – “ပျောက်လှချေလား ဒေါ်ဝါယောရေ . . . ဟု မေးလိုက်သောအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက – “ ပျောက်နေရင် စိတ်ချမ်းသာပေတော့ဆရာရေ . . .၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဆင်ပြေလို့ ပျောက်နေတာမှတ်ပါ …၊ အဟဲ … အခုလို ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု အဆင်မပြေလို့လို့သာ မှတ်ပေတော့ ဆရာရေ . . . ဟု ပြန်ပြောလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ၄င်းအား မနောမယလက်ဖက်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံရလေ၏။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်က – “ဆိုစမ်းပါဦး၊ ဘာတွေများ အဆင်မပြေလို့လဲ … . . ဟု မေးလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက –
“အဆင်မပြေတာက ကျွန်မမဟုတ်ဘူး ဆရာရဲ့၊ တူမလေးတစ်ယောက် အဆင်မပြေတာပါ၊ သို့ပေသော်လည်းပဲ အဲဒီတူမလေးက ကျွန်မကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့နေတာဆိုတော့ သူအဆင်မပြေခြင်းဟာ ကျွန်မရဲ့အဆင်မပြေခြင်းပဲပေါ့၊ အဲဒီတော့ . . .သူအဆင်ပြေပါမှ ကျွန်မအဆင်ပြေမယ့် ကိစ္စပေါ့ဆရာရယ် .. . . ဟု ပြောလေတော့၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ခေါင်းကိုကုပ်ရင်း “ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ ဒေါ်ဝါယောရယ် ”ဟု ပြောလိုက်ရ၏။ ဒေါ်ဝါယောကြီးက နှုတ်ခမ်းကိုမဲ့ရင်း “ဆရာ နားရှုပ်မှာစိုးလို့ကိုပဲ အစကတည်းက မရှင်းရှင်းအောင်ဆိုပြီး ရှုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို ရှင်းအောင် တစ်ချက်ခြင်း ရှင်းရှင်းလေး ပြောလိုက်တာလေ ဆရာရဲ့ ဆရာတို့လည်း ခက်ပါတယ် … . .ဟု ပြောပြန်သဖြင့် ဟု ပြောပြန်သဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း – “ဟုတ်ပါပြီဗျား၊ ခင်ဗျားတို့ပဲ လွယ်ပါတယ်၊ ကဲ . . .ပြောကြည့်ပါဦး၊ ဘာကိစ္စလဲ . . .”ဟု ပြောလိုက်ရလေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက “အဲဒီကိစ္စက အစတုန်းကတော့ အဆင်ပြေနေတာ ဆရာရဲ့ ၊ ဒီနောက်ပိုင်းကျမှ သိသိသာသာ အဆင်မပြေဖြစ်လာတာ၊ ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ တူမလေးရဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကိစ၊ တူမလေးက သူ့အိမ်ရှေ့မှာပဲ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေး တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းတာ၊ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေခဲ့တာ၊ သူတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ နာမည်ကိုကြီးသွားတာပဲ၊ တော်တော်ကိုရောင်းရတာ၊ သူ့မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေကလည်းကြိုက်တယ်၊ ကလေးတွေကလည်း အရမ်းကြိုက်တာ ဆရာရဲ့” ဟု ပြောရာ ကျွန်ုပ်က -“ အဲဒီလောက် အဆင်ပြေနေတာများ ကျုပ်စားဖို့လည်း မုန့်ဟင်းခါးလေးထည့်ယူလာခဲ့ပါတော့လားဗျာ . . .” ဟု ပြောလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက -“ အဲဒါက ဟိုအရင်တုန်းကပြောတာ ဆရာရဲ့ ၊ အခု အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး၊ အခြေအနေက ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ . . .” ဟု ပြောသောကြောင့် ကျွန်ုပ်က -“ သြော် . . .အဲဒါဆို ကျုပ်ကတောင် လမ်းထိပ်ကနေ မုန့်ဟင်းခါးဝယ်ပြီး ခင်ဗျားကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ့် အပေါက်မျိုး ဖြစ်နေပြီထင်တယ် . . .” ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက ခေါင်းကလေးကို တွင်တွင်ညိတ်ရင်း – “ ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်၊ ဆရာ့အစီအစဉ်မဆိုးဘူး . . .”ဟု ပြောလေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က – “ ကဲပါ ဒေါ်ဝါယောရယ် . . .ခင်ဗျားတူမဆိုင်က ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ဆိုတာလေးပဲ လိုရင်းကိုရောက်အောင် ပြောစမ်းပါဗျာ . . .” ဟု တိုက်တွန်းရလေ၏။ ထိုအခါ ဒေါ်ဝါယောကြီးက –
“ ဒီလို ဆရာရဲ့ . . . သူ့ဆိုင်လေးက တော်တော့်ကို ရောင်းကောင်းခဲ့တာ၊ ကျွန်မလည်းစိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့လေ၊ ဒီနောက်ပိုင်း သိသိသာသာ ရောင်းအားကျသွားတယ်၊ သူ့ဆိုင်ကိုအားပေးနေကျ ပုံမှန်ဖောက်သည်တွေပါ တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားကြတယ်၊ ကျွန်မသတိထားမိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ . . .သူတို့ဆိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က အခန်းကို လူအသစ်တွေပြောင်းလာပြီးကတည်းက မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲ . . .” ဟု ပြောပြလေ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က -“ အဲဒီပြောင်းလာတဲ့မိသားစုဟာ တော်တော့်ကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ကြင်ကြင်နာနာရှိကြဟန်တူတယ်ဗျ . . .” ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးသည် ရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့် ဖြတ်ကနဲ ဖိ၏။ မေးစေ့ကို ရှေ့သို့ထိုး၍ နှုတ်ခမ်းကိုမဲ့၏။ ပြီးနောက် – “ အောင်မယ်လေးတော် . . .အဲဒီမိသားစုလောက် ရန်သတ်တာ၊ အဲဒီမိသားစုပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ပြီးကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး၊ နှစ်လေးဆယ် စစ်တိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဗမာဘုရင် အင်းဝမင်းခေါင်နဲ့ မွန်ဘုရင် ရာဇဓိရာဇ်တို့ တစ်မိသားစုထဲမှာ ၀င်စားလာကြသလား အောက်မေ့ရတယ်၊ သတ်လိုက်ကြတဲ့ရန်ဆိုတော့ ဆရာရယ် . . .၊ သံဃာတော်တွေ အရုဏ်ဆွမ်းခံ မကြွခင်ကနေ ညကာလသားတွေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ သူတို့အိမ်မှာက ပတ်လည်လှည့်ပြီး ရန်သတ်နေကြတာ ဆရာရေ . . .” ဟု မဲ့ကာရွဲ့ ကာနှင့် ပြောနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်လည်း တခစ်ခစ်နှင့် ရယ်နေမိလေတော့၏။ ထို့နောက်တွင်မှ – “ ဒီလိုရှိတယ် ဒေါ်ဝါယောရဲ့ ၊ ကိုယ့်အိမ်တို့ ၊ ဆိုင်တို့ရဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်တွေ၊ ရှေ့မျက်နှာစာတွေ ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာယူရာ အရပ်တွေဗျ . . .၊ အဲဒီဘက်တွေကနေ ဘုရားသံ၊ တရားသံတို့ ၊ ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာတို့ မြင်လေလေ၊ ကြားလေလေ၊ ကြုံလေလေ ကိုယ်အိမ်၊ ကိုယ့်ဆိုင်မှာလည်း နိမိတ်ကောင်းပြီး လာဘ်ရွှင်စီးပွားတက်လေ ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ . . .။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အဲဒါနဲ့ပြောင်းပြန် ရှေ့မျက်နှာစာတို့၊ ခေါင်းရင်းဘက်တို့ကနေ ဆဲကြ၊ ဆိုကြ၊ သတ်ကြ၊ ပုတ်ကြ၊ ငိုကြ၊ ယိုကြ … မကောင်းတာတွေ မြင်ရ၊ ကြားရ၊ ကြုံရမယ်ဆိုရင်တော့၊ သူတို့ဆီက မကောင်းခြင်းတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ပါ မကောင်းနိမိတ်အဖြစ် လာပြီးသက်ရောက်တတ်တယ်ဗျို့ . . .၊ ဟိုဘက်က ရန်သတ်လေလေ၊ ဒီဘက်ကလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း လာဘ်ပိတ်လေလေတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်တယ် . . .”ဟု ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ဝါယောကြီးက အလျင်စလိုဖြင့် –
“ ဟုတ်တယ်ဆရာရေ့ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်မက သေသေချာချာကို သတိထားမိနေတာ၊ ဟိုတလောလေးတုန်းက အဲဒီမိသားစု တစ်စုလုံး ခရီးထွက်သွားကြတာ လေးရက်လောက် ပျောက်သွားကြတယ်၊ အဲဒီလေးရက်လောက်မှာ လူပါးနေတဲ့ တူမလေးရဲ့ ဆိုင်ဟာလေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး လူတွေပြန်ပြည့်သွားတယ် ဆရာရဲ့ ၊ သူတို့တွေလည်းပြန်ရောက်လာရော ကျွန်မတူမရဲ့ ဆိုင်ကလေးလည်း အရင်းပြုတ်ရော ဖြစ်တော့တာပါပဲ ဆရာရဲ့ ၊ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ၊ အဲဒီမိသားစု အမြဲတမ်းခရီးထွက်နေအောင် ဆရာ့အနေနဲ့ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လေးလုပ်ပေးပါလား . . . ဟု ပူဆာလေတော့၏။ ကျွန်ုပ်က ရယ်၍ –
“ အောင်မယ်လေး ဒေါ်ဝါယောရယ် . . .၊ သူများမိသားစုကိစ္စက ခင်ဗျားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ ကိုယ့်တူမဆိုင် အဆင်ပြေရေးကိုပဲ ခင်ဗျားက လုပ်ရမှာလေ၊ ဒီလိုလုပ်ဗျာ . . .၊ ဟိုဘက်က ဆဲသံ၊ ဆိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံကြားလေလေ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ဘုရားတရားကြည်ညိုခြင်းကို ပိုပြီး လုပ်လေလေ ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ၊ ပြီးတော့ ခေါင်းရင်းတို့၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တို့ကနေ ဆဲသံ၊ ငိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံလိုဟာမျိုး ကြားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဆိုင်တို့ ၊ အိမ်တို့ရဲ့ နောက်ဖေးဘက်မှာရှိတဲ့ အိမ်သာတံခါးတို့ ၊ မီးဖိုချောင်တံခါးတို့ စသည်ဖြင့် နောက်ဖေးဘက်မှာ ဆူဆူညံညံအသံထွက်သွားအောင် ခြေထောက်နဲ့ ကန်ကျောက်လိုက်တာမျိုး လုပ်လိုက်ပါ၊ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် လာပြီးခိုက်စေမယ့် နိမိတ်ဆိုးဟာ နိမိတ်ကောင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး ဟိုဘက်က မကောင်းတဲ့ အသံဗလံတွေ ထွက်လေလေ ကိုယ့်ဆီမှာ လာဘ်ပွင့်လေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျား . . .”ဟု ပြောပြလိုက်ရလေ၏။ ဒေါ်ဝါယောကြီးက – “ အဲဒါလောက်လေးနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား ဆရာရယ် . . .” ဟု မယုံမရဲလေသံကလေးဖြင့် မေးလေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က – “အဆင်ပြေတဲ့အပြင် ဟိုဘက်ကိုတောင် လွန်သွားပါလိမ့်ဦးမယ် ဒေါ်ဝါယောရေ . . .၊ အဲဒီလို အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ နောက်တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတူမဆိုင်က မုန့်ဟင်းခါးလေး ပါဆယ်နှစ်ထုပ်လောက်ဆွဲလာပြီး ၀မ်းသာအားရ လာပြောလှည့်ပေတော့ဗျို့ . . .” ဟု ပြောလိုက်ရလေတော့သတည်း … ။